प्रधानन्यायाधीशले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सुरक्षा माग | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रधानन्यायाधीशले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सुरक्षा माग
प्रधानन्यायाधीशले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सुरक्षा माग
माघ १७ गते, २०७४ - १३:३२
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै डा. गोविन्द केसीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सुरक्षा माग गरेका छन् ।
भण्डारीले शान्ति सुरक्षा पाउँ भन्दै बुधबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन समेत दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २६ पुस अन्दाजी ५.३० बजे र बिहीबार बिहान अन्दाजी ९.३० बजे फोन गरेर आफुलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएको भण्डारीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन । माघ १६ गते २ बजेतिर केही मानिस आफ्नो घरमा आएर पुनः धम्की दिएको भण्डारीले विेदनमा खुलाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशबाटै आफ्नो ज्यानमा खतरा भएको उनले बताएका छन् ।
भण्डारी डा. केसीविरुद्ध परेको अदालतको मानहानी मुद्दामा केसीको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
माघ १७ गते, २०७४ - १३:३२ मा प्रकाशित